China HRB400 Steel Rebar yekuvaka fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Simbi rebar inozivikanwawo sehot rolled ribbed steel bar.Zvakajairwa zvinopisa zvakatenderedzwa zvakasimbiswa simbi rebar inotaridzwa neHRB uye iyo yepasi goho poindi.H, R, B zvakateerana anomiririra Kupisa kwakakungurutswa,Ribbed, Simbi bha (Mabhawa) mazwi matatu ekutanga echirungu alphabet.
2.Grade: Q195,Q235,Q345,HRB335,HRB400,HRB500, etc.
Simbi rebar isimbi simbi ine ribbed pamusoro, inozivikanwawo se ribbed steel bar.Ribbed reinforcement inonyanya kutakura kusagadzikana mukongiri.Mbabvu dzesimbi dzesimbi dzinogona kutakura simba rekunze zviri nani nekuda kwesimba radzo rekubatanidza nekongiri.Ribbed simbi mabara anoshandiswa zvakanyanya mumhando dzakasiyana siyana dzekuvaka, kunyanya dzakakura, dzinorema uye dzakareruka dzakatetepa-madziro uye yakakwirira-inosimuka zvivakwa zvekuvaka.
1.Surface quality.Miyero inoenderana inotaura nezvemhando yepamusoro yesimbi rebar, iyo inoda kuti magumo achekwe akatwasuka, kumusoro hakufanirwe kuve nekutsemuka, mavanga uye kupeta, uye hapafanirwe kuve nekukanganisa kunokuvadza mukushandiswa.
2.Allowable value of dimension deviation.Iyo yekukombama degree resimbi rebar uye iyo geometric chimiro chesimbi rebar inotsanangurwa mune yakakodzera zviyero.
3.Kutsemuka, mavanga uye kupeta hazvibvumirwi pamusoro pemasimbi esimbi.
4.Mapundu anobvumirwa pamusoro pemasimbi esimbi, asi haafaniri kudarika kureba kwembabvu dzakachinjika.Kudzika uye kureba kwezvimwe kukanganisa pamusoro pemasimbi esimbi hazvizove zvakakura kudarika kutenderwa kutsauka kwehukuru hwezvikamu zvavo.
Simbi rebar inoshandiswa zvakanyanya mukuvaka engineering sedzimba, mabhiriji nemigwagwa.Kubva kumigwagwa mikuru, njanji, mabhiriji, makombi, tunzira, kudzora mafashama, madhamu uye zvimwe zvivakwa zveveruzhinji, kusvika kune hwaro, matanda, makoramu, madziro uye slabs edzimba, simbi rebar chinhu chakakosha chivakwa.Pane kudiwa kwakasimba kwesimbi rebar mukuvaka zvivakwa uye kwakasimba kusimudzira kwezvivakwa.